. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: မျှော်လင့်မိတဲ့ အမောများ
ကျမမှာ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ် .. ဒါတွေက မကောင်းဘူး ပြင်သင့်တယ်ဆိုတာ သိပေမယ့်လည်း မပြင်နိုင်သေးဘူး .. ဒါပေမယ့် ကြိုးစားပြီးတော့ တော့ ပြင်နေပါတယ် ..
ကျမ ငယ်ငယ်ကဆို ကိုယ်မကျေနပ်ရင် မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိတယ် .. စိတ်မပါဘူး မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်း ဘယ်သူခိုင်းခိုင်း မလုပ်တတ်ဘူး .. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ နေချင်သလို နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကိုး ..
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျမ စာတွေဖတ်ဖြစ်တယ် .. မှတ်မှတ်ရရ စစချင်း(၀တ္တုတို့ ကာတွန်းတို့ကလွဲရင်ပေါ့) တရားစာအုပ် စကိုင်ဖြစ်တာက ဆရာတော် ဦးဇောတိကစာအုပ်တွေပါ .. ငယ်ငယ်က ဖေကြီးက သဘောင်္လိုက်တယ် .. မေကြီးကို စာအုပ်တွေမှာရင် ၀ယ်ပို့ပေးပြီး ပြန်လာပြီး ပြန်ထွက်တော့ မယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေ ဘုရားစင်အောက်က ဗီဒိုလေးထဲမှာ ထည့်ထားတတ်တယ် .. ၁၀တန်းအောင်ပြီး အိမ်နဲ့ သင်တန်း တက်တုန်းကာလက နေ့ခင်းဘက်ဆို အပေါ်ထပ်မှာ ကျမတယောက်တည်းရှိတာများတယ် .. အဲလိုမျိုးဆို ပျင်းပျင်းနဲ့ စာအုပ်တွေမွှေနှောက်ဖတ်တတ်တယ် .. အဲလိုစာတွေဖတ်ရင်း အသိလေးတွေရှိလာတယ် .. (နဲနဲပေါ့ ..း) ဘယ်ကိစ္စက သင့်တော်လဲ ဘယ်ကိစ္စက မသင့်တော်ဘူးလဲ .. ဘယ်လုပ်ရပ်ကကောင်းလဲ မကောင်းလဲ စသည်ဖြင့် တွေးတော ဆင်ခြင်တတ်လာတယ် .. စာအုပ်က ရတဲ့ အသိနဲ့ပေါ့ ..
အရင်ကဆို ကိုယ်ဒီလူတယောက်ကို မကျေနပ်ဘူးမလား .. ချက်ချင်းပြန်တုန့်ပြန်တတ်တယ် .. မတုန့်ပြန်နိုင်ရင်တောင် စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့နဲ့ ပေါ့ .. နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာတွေမှာရေးထားသလို အားလုံးက ဧည့်သည်တွေပဲ .. အားလုံးက သေလူတွေပဲ .. အသက်ရှင်လာပြီဆိုကတည်းက သေဖို့ တရွေ့ရွေ့လှမ်းနေကြတာပဲ .. ကိုယ်ချစ်တဲ့လူလည်းသေမှာပဲ ကိုယ်မုန်းတဲ့လူလည်းသေမှာပဲ .. ကိုယ်တိုင်လည်း တနေ့ သေရမှာပဲ .. သူ့ကိုမုန်းတဲ့အတွက် ကိုယ်ပဲရှုံးတာပဲ .. ကိုယ့်အချိန်တွေထဲက ဖဲ့ပေးပြီး သူ့ကိုမုန်းနေတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ နှောင့်နှေးနေပြန်ရော .. စတာတွေကို သိလာရတယ် .. သိတယ်ဆိုပေမယ့် သိတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ် .. လက်တွေ့မှာတော့ ခံစားလွယ်တုန်း တုန့်ပြန်လွယ်တုန်းပေါ့ .. ပြင်ရမယ် ပြင်သင့်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့် မပြင်နိုင်သေးဘူး ..
ပြီး နောက်တခုက ကျမအကျင့်က ဒီလူကို မခေါ်မပြောချင်ဘူးဆို လှည့်ကိုမကြည့်တတ်တာ .. အားနာတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး .. ကြည့်မရရင်လည်း ကြည့်မရဘူးပဲ .. ကြည့်မရတဲ့အကြောင်းက ဘာလဲဆိုရင်လဲ တိတိပပ မသိ .. မုန်းချင်လို့ကိုမုန်းတာ .. မခေါ်ချင်လို့ကိုမခေါ်တာ .. အဲလိုမျိုးဆိုးပါတယ် .. အဲဒီတော့ မေကြီးက ပြောတယ် .. သမီးတဲ့ လူတွေနေတဲ့နေရာမှာ နေနေသရွေ့တော့ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမှာပဲတဲ့ .. လူတွေနဲ့ အဆက်အဆံမလုပ်ချင်ရင် တောထဲသွားနေမှပဲရမယ်တဲ့ ..
ကျမက ခေါင်းမာတယ် .. ပြန်မပြောနားမထောင်ပေါ့ .. ဆူရင် မထုံတက်တေးနဲ့ နောက်ကွယ်ကျ လုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တယ် .. ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့ကိစ္စဆို လုပ်ရော ဘယ်သူ့ပြောစကားမှနားမထောင်ဘူး .. ကိုယ့်ဥာဏ်လေး တထွာတမိုက်လောက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် မှန်တယ်ထင်နေတာ တော်တော်လည်းရီစရာကောင်းပါတယ် .. အဲဒီတုန်းကတော့ ဟုတ်လှပြီပေါ့ .. :D
ခုတော့ အရင်တုန်းကလို သိပ်မလုပ်တော့ဘူး .. (လုပ်လို့ရတဲ့လူကိုတော့ လုပ်သေးတယ် :P) လုပ်ငန်းခွင်လည်းဝင်နေရပြီ သူများနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လေ .. အပိုးကျိုးနေပြီပေါ့ .. မပြောချင်လည်းပြောရတယ် .. မခေါ်ချင်လည်းခေါ်ရတယ် .. မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလို့မရတော့ဘူး .. ကိုယ်ပြသနာဖြစ်လည်းလိုင်းရှင်းပေးမယ့် မိဘက အနီးအနားမှာ မရှိ .. ပြောရင်း ကိုယ့်ကိုယ်တောင် သနားလာပြီ .. :P
ခုဒီမှာတော့ မမြင်ချင်ပေမယ့်လည်း ကြည့်တတ်နေပြီ .. မရီပြချင်ပေမယ့်လည်း ရီပြတတ်နေပြီ .. မပြောချင်ပေမယ့်လည်း စကားလုံးတွေရှာပြီး ပြောတတ်နေပြီ .. စိတ်ထဲက မပါတာတွေလုပ်ရတာ တော်တော်လည်း မောပါတယ် .. ဒီထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်သွားမယ့် အသက်ပိုင်းကျရင်တော့ ရင်ထဲမှာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပြီး အားလုံးကို စိတ်ပါလက်ပါ ရီပြ ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်ပြတတ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/19/2009 04:03:00 PM